Maxay Kiiniya u rabtaa inay joojiso maxkamada badda ee ku socota - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxay Kiiniya u rabtaa inay joojiso maxkamada badda ee ku socota
Kiiniya ayaa dhowr jeer ku celisay in iyada iyo Somaliya ay si hoose oo jaarnimo ah xal uga gaaraan baddeena ay xalaashatey ayadoo nagala tashan kadibna u yeeratay shirkado u qoda oo u soo saara saliid ay ku manafacaadsato kuna gumaysato Somaliya oo taagdaran.
Khabiir dhinaca badda ah ayaa qirtey in marka la eego xadka caalamiga ee wadamada ku jaarka ah dhinaca badda ay Somaliya ka gar leedahay oo xadkeedu u soo baxo dhinaca tooska ee aanu ku soo leexan isla dhinaceeda.
“Waa arinta Kiiniya ka oohinaysa oo muddo ku dhow sanno damacsanayd inay xalaashato dhinaca xadka ee uu ka tagey Ingiriiskii u gooyayna qayb iyo dad dhan oo Somali ah ayuu yiri Walker oo isagu wax ka dhiga jaamacada ku taal ee Ingiriiska.
Wuxuu intaas raaciyay in labada dal si daacada uga kala bogan oo u hufin meesha saxda ah ee xadku maro intii auna aadan maxkamada caalamiga ah taasna Kiiniya oo dawlad isku haysata oo yasaysa Somalida is cunaysa 30-ka sano ay ugu wacan tahay, markey hadda ogaateyna oohin barooranaysa.
Wuxuuna saadaaliyay in xukunku siin doonin Somaliya guul buuxda maadaama ayna lagayn awood ay ku maamusho dalkeeda oo merlkasta joogaan maamulo taagdaran oo ka farxinaysa Kiiniya.
Afhayeen u hadley madaxtooyada Kiiniya ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in Uhuru madaxweyne Farmaajo kula kulmi doono shir ka dhacaya Yugandha si uu uga qanciyo shirkii London oo shirkad Xasan Sheekh u kgolaadey inay qaadato macluumaadka shidaalkeena ay ku baayacaysay waxay haysato.